ဆရာကျကျ ကြက်ဥပြုတ်မယ် - For her Myanmar
အမယ် ဒါလေးများဆိုပြီး အထင်တော့ဖြင့် မသေးစေချင်
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ခဏလောက်ဆွံ့အ သွားတယ်မလား၊ မညာချင်စမ်းပါနဲ့ချိမရယ်။ ‘ဟဲ့ ဘယ်နှယ်ပေဂ်ျ့တုန်း၊ ကြက်ဥလောက်တော့ ငါတို့လည်းပြုတ်တတ်ပါတယ်’ ပေါ့? ပြောပါဦး အနှစ်လိုချင်ရင် အကျက်ဖြစ်၊ အကျက်လိုချင်ရင် အနှစ်ထွက်နေတဲ့ အကြောင်းလေး ဆိုတော့ ကြက်ဥကို ဆရာကျကျ၊ အထာကိုင်ပြီး ပြုတ်လို့ရအောင်… အိုခီ စလိုက်ကြမယ်လေ။
ပထမဆုံး ကြက်ဥကို အိုးအလွတ်ထဲထည့်ပြီး ရေအေးကို ဖြည့်ပါ။ (ရေဖြည့်တဲ့အခါ ကြက်ဥကို မြုပ်ရုံလောက်ပဲထည့်နော်။ အရမ်းနည်းရင်လည်း အကျက်မညီသလို ရေအရမ်းများရင်လည်း အချိန်ကြတယ်။)
ရေဖြည့်ပြီးတာနဲ့ အိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး မီးပြင်းပြင်းနဲ့တည်ပါ။
Related Article >>> စုံစီနဖာ မီးဖိုချောင်နည်းလမ်း အဖြာဖြာ
ရေနွေးလုံးဝဆူလာတာနဲ့ ကြက်ဥအိုးကို အဖုံးအုပ်ပြီး မီးပိတ်လိုက်ပါ။
ကဲ ဒီအပူရှိန်နဲ့ ဆက်ပြုတ်ပြီး အချိန်စမှတ်လို့ရပါပြီ။ အချိန်မှတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီဇိုင်းဘာညာကာလာအနေအထားက အရေးကြီးသေးတာမို့ ဆက်ဖတ်ကြည့်ဦးနော်…
၃ မိနစ်ပဲပြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်ဥအကာက ခပ်ဖြူဖြူပျော့ပျော့အနေအထားနဲ့ အနှစ်က လုံးဝအရည်ဖြစ်နေမှာပါ။ (ခါတိုင်းခေါက်ဆွဲပြုတ်ထဲ ထည့်ပြုတ်စားသလိုပဲ ) ဆားလေးနည်းနည်း ပေါက်ပြီးသောက်ရင် အံကိုက်ပေါ့။
၄ မိနစ် ပြုတ်ထားလိုက်ရင်တော့ ကြက်ဥအကာတွေက ပျော့ပေမဲ့ နည်းနည်းခပ်တင်းတင်းလေး ဖြစ်လာပြီး အနှစ်ကလည်း အရည်ကိုမှ နည်းနည်းပျစ်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်လာပါပြီ။
၆ မိနစ် ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ကြက်ဥအကာတွေ ပိုတင်းသွားပြီး အနှစ်ကလည်း အခဲသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။။
၁၀ မိနစ် ကြာပြုတ်ထားလိုက်ရင်တော့ ကြက်ဥအကာတွေက လုံးဝတင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်သွားပြီး အနှစ်ကခဲပေမဲ့ အရည်လေးနည်းနည်းတော့ ကျန်နေသေးတယ်။
၁၅ မိနစ်ကြာ ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ အကာရော၊ အနှစ်ရော လုံးဝ ကျက်သွားပါပြီလို့။
Related Article >>> ကွေ့သယိုနဲ့ ချက်နည်းအသွယ်သွယ်
အချိန်နဲ့ တိတိကျကျပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ခွာရလွယ်အောင် အိုးထဲကဆယ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ ရေအေးထဲကို တန်းထည့်ပြီး ၁ မိနစ်လောက် စိမ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ခပ်မာမာစောင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီး အက်ရာအတိုင်း ကြက်ဥကို ဖြည်းဖြည်းချင်ခွာချလိုက်ရင်တော့ အင်မတန်မှ လှပပြီး ဆရာကျတဲ့ ကြက်ဥလေး ရပါပြီနော်။ ကြက်ဥဆိုပြီး အထင်မစမောနဲ့။ တော်ကြာနေ ဒါကြက်ဥပြုတ်အဆင့်မဟုတ်ဘူး။ စော်ကားခံလိုက်ရသလိုပဲ ဆိုပြီးဝိုင်းပြောနေကြမှ အခက် 😛
References : greatist, thekitchn
အမယျ ဒါလေးမြားဆိုပွီး အထငျတော့ဖွငျ့ မသေးစခေငျြ
ခေါငျးစဉျကွညျ့ပွီး ခဏလောကျဆှံ့အ သှားတယျမလား၊ မညာခငျြစမျးပါနဲ့ခြိမရယျ။ ‘ဟဲ့ ဘယျနှယျပဂြျေ့တုနျး၊ ကွကျဥလောကျတော့ ငါတို့လညျးပွုတျတတျပါတယျ’ ပေါ့? ပွောပါဦး အနှဈလိုခငျြရငျ အကကျြဖွဈ၊ အကကျြလိုခငျြရငျ အနှဈထှကျနတေဲ့ အကွောငျးလေး ဆိုတော့ ကွကျဥကို ဆရာကကြ၊ အထာကိုငျပွီး ပွုတျလို့ရအောငျ… အိုခီ စလိုကျကွမယျလေ။
ပထမဆုံး ကွကျဥကို အိုးအလှတျထဲထညျ့ပွီး ရအေေးကို ဖွညျ့ပါ။ (ရဖွေညျ့တဲ့အခါ ကွကျဥကို မွုပျရုံလောကျပဲထညျ့နျော။ အရမျးနညျးရငျလညျး အကကျြမညီသလို ရအေရမျးမြားရငျလညျး အခြိနျကွတယျ။)
ရဖွေညျ့ပွီးတာနဲ့ အိုးကို မီးဖိုပျေါတငျပွီး မီးပွငျးပွငျးနဲ့တညျပါ။
Related Article >>> စုံစီနဖာ မီးဖိုခြောငျနညျးလမျး အဖွာဖွာ
ရနှေေးလုံးဝဆူလာတာနဲ့ ကွကျဥအိုးကို အဖုံးအုပျပွီး မီးပိတျလိုကျပါ။
ကဲ ဒီအပူရှိနျနဲ့ ဆကျပွုတျပွီး အခြိနျစမှတျလို့ရပါပွီ။ အခြိနျမှတျတဲ့အခါမှာလညျး ဒီဇိုငျးဘာညာကာလာအနအေထားက အရေးကွီးသေးတာမို့ ဆကျဖတျကွညျ့ဦးနျော…
၃ မိနဈပဲပွုတျထားမယျဆိုရငျတော့ ကွကျဥအကာက ခပျဖွူဖွူပြော့ပြော့အနအေထားနဲ့ အနှဈက လုံးဝအရညျဖွဈနမှောပါ။ (ခါတိုငျးခေါကျဆှဲပွုတျထဲ ထညျ့ပွုတျစားသလိုပဲ ) ဆားလေးနညျးနညျး ပေါကျပွီးသောကျရငျ အံကိုကျပေါ့။
၄ မိနဈ ပွုတျထားလိုကျရငျတော့ ကွကျဥအကာတှကေ ပြော့ပမေဲ့ နညျးနညျးခပျတငျးတငျးလေး ဖွဈလာပွီး အနှဈကလညျး အရညျကိုမှ နညျးနညျးပဈြတဲ့ အနအေထား ဖွဈလာပါပွီ။
၆ မိနဈ ပွုတျပွီးသှားရငျတော့ ကွကျဥအကာတှေ ပိုတငျးသှားပွီး အနှဈကလညျး အခဲသေးသေးလေးတှေ ဖွဈလာပါပွီ။။
၁၀ မိနဈ ကွာပွုတျထားလိုကျရငျတော့ ကွကျဥအကာတှကေ လုံးဝတငျးတငျးရငျးရငျး ဖွဈသှားပွီး အနှဈကခဲပမေဲ့ အရညျလေးနညျးနညျးတော့ ကနျြနသေေးတယျ။
၁၅ မိနဈကွာ ပွုတျပွီးသှားရငျတော့ အကာရော၊ အနှဈရော လုံးဝ ကကျြသှားပါပွီလို့။
Related Article >>> ကှသေ့ယိုနဲ့ ခကျြနညျးအသှယျသှယျ
အခြိနျနဲ့ တိတိကကြပြွုတျပွီးပွီဆိုရငျတော့ ခှာရလှယျအောငျ အိုးထဲကဆယျထုတျလိုကျတာနဲ့ ရအေေးထဲကို တနျးထညျ့ပွီး ၁ မိနဈလောကျ စိမျလိုကျပါ။ ပွီးတာနဲ့ ခပျမာမာစောငျးတဈခုနဲ့တိုကျပွီး အကျရာအတိုငျး ကွကျဥကို ဖွညျးဖွညျးခငျြခှာခလြိုကျရငျတော့ အငျမတနျမှ လှပပွီး ဆရာကတြဲ့ ကွကျဥလေး ရပါပွီနျော။ ကွကျဥဆိုပွီး အထငျမစမောနဲ့။ တျောကွာနေ ဒါကွကျဥပွုတျအဆငျ့မဟုတျဘူး။ စျောကားခံလိုကျရသလိုပဲ ဆိုပွီးဝိုငျးပွောနကွေမှ အခကျ 😛
Tags: boil, Chef, egg, pro, tips
Hnin Ei Oo December 26, 2018